Madheshvani : The voice of Madhesh - वीरगंजबाट ४ खर्ब लिने, बजेट दिने बेला कञ्जुस्याई किन ?
राज्यलाई वीरगञ्जले वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ दिने गरेको छ तर राज्यले वीरगञ्जलाई बजेट दिन किन कञ्जुस्याई गर्छ ? अर्थ मन्त्रीलाई सांसद यादवले प्रश्न गरे ।
वीरगञ्ज भन्सार, आइसिपी, सुख्खा बन्दरगाह लगायत उद्योगहरुबाट वार्षिक ४ खर्ब लिने अर्थ मन्त्रीज्यू तर वीरगञ्जको विकासका लागि वीरगञ्जलाई बजेट दिने बेला किन कञ्जुस्याई गर्नु हुन्छ ? सांसद यादवले प्रश्न गरे ।
जुन सरकार आएपनि जुन अर्थमन्त्री आएपनि वीरगञ्जलाई हेर्ने नजरिया परिवर्तन भएको छैन । त्यसकारण अब कर लिने मात्र हैन वीरगञ्जको पूर्वाधार लगायत हरेक क्षेत्रमा विकासका लागि विशेष बजेट छुटयाउनु पर्ने माग गरे ।
वीरगञ्जलाई देशकै आर्थिक राजधानीको रुपमा विकास गर्न शहरी विकास प्राधिकरण गठनको माग समेत गर्दै सांसद यादवले त्यसका लागि विशेष बजेट समेत छुटयाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।